.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ဓမ္မတေး Mp3 သီချင်းများ
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဓမ္မတေး သီချင်းတစ်ပုဒ်တောင်းဆိုလာတဲ့အတွက် ဓမ္မတေး Mp3 သီချင်းများ ဆိုပြီး
စာမျက်နှာလေး တစ်ခု သီးသန့်လုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟိုအရင်ကတည်းက ဆိုဒ်မှာ ဓမ္မတေး သီချင်းတွေကို
စာမျက်နှာလေး တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ တင်ပေးဖို့ အစီအစဉ်က ရှိပါတယ်။ ခုတော့ လုပ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ နောက်ထပ်လည်း
ကျွန်တော် ဓမ္မတေး သီချင်းတွေလိုက်ရှာပြီးတော့ ဒီစာမျက်နှာမှာ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်။ နောက်ပြီး သူငယ်ချင်းတို့
နားထောင်ချင်တဲ့ ၊ လိုချင်တဲ့ ဓမ္မတေးတွေကိုလည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ ( မှတ်ချက်။ ။ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မတေးများသာ )
ဓမ္မတေး သီချင်းနာမည်နဲ့ တေးဆိုသူ နာမည်တွေကို ဒီနေရာလေးမှာ သေချာလေး ပြောပေးပါ။ သီချင်းတွေကို
ဒေါင်းယူမယ်ဆိုရင် Click Here !! ကို Right Click >> Save Link As နှိပ်ပါ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..
1 မြတ်ဂုဏ်တော်သခင် သန်းမြတ်စိုး Click Here !! 2.57 MB
2 အရပ်ဆယ်မျက်နှာ မေတ္တာပို့နည်း စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 2.40 MB
3 အန္တရာယ်ကင်း စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 3.10 MB
4 အောင်နိမိတ် စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 3.00 MB
5 အောင်စေပိုင်စေ စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 3.00 MB
6 ဗုဒ္ဓမေတ္တာပန်း စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 3.30 MB
7 မေတ္တာဂုဏ် စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 2.60 MB
8 မေတ္တာသုတ်တော်လာမေတ္တာပွါးနည်း စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 2.40 MB
9 သံဗုဒ္ဓေ စိုးစန္ဒာထွန်း Click Here !! 2.60 MB
10 စေတနာအဓိကပါ ရာဇာဝင်းတင့် Click Here !! 2.20 MB
11 အရဟံဂုဏ်တော်ရှင် ဦးမောင်မောင်ကြီး ၊ ဒေါ်တင်တင်မြ ၊ ဒေါ်ရီရီသန့် Click Here !! 2.50 MB
12 ဘဝသံသရာ ဦးသုခ Click Here !! 2.00 MB
13 ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ချမ်းချမ်း Click Here !! 2.00 MB
14 Title Singer Click Here !! 2.00 MB
15 Title Singer Click Here !! 2.00 MB
Posted by Thurainlin at 10:24
Labels: Mp3, ဓမ္မတေး